Amaahda dulsaar la'aanta ah ee ka timaada McKnight waxay u oggolaanaysaa Sanduuqa Maalgelinta Khayraadka in uu ku biiro dhul beeran ah oo ku yaala goobo dabiici ah oo tayo sare leh. Ilaalinta dhulalka qoyan iyo kaymaha ayaa ilaaliya Wabiga Mississippi iyo qaybaheeda, sida Webiga St. Croix.
$ 5 milyan oo amaah ah shan sano oo ah 2%; laga soo bilaabo sannadka 2016
$ 6.5 milyan deyn afar sano ah 2%; asal ahaan ka soo jeeda 2011. Bixin buuxda sanadka 2015
Deynta amaahda si aad u iibsato qulqulatooyinka isqurxinta iyo kaymaha ee ku yaal Wabiga Mississippi iyo dariiqyadeeda si loo hubiyo ilaalinta joogtada ah, si kor loogu qaado tayada biyaha.
Guulaysiga ugu horreeya ee deynta. Dhameystiray sannadka 2015.
Amaahda labaad waxay socotaa wadada.
Sanduuqa Dhaqanka iibsadey oo la ilaaliyey 113,492 acres (xajmiga Guam) oo leh faa'iido dhaqaale oo sare leh qiimo rasmi ah oo ah $ 61.3 million. Laba mashaariic ayaa lagu iibiyey qodobbo ilaalin joogto ah Wisconsin iyo Louisiana. Mashruuc saddexaad ah ayaa u oggolaan doona timajin joogto ah iyo ka hortagga qodobbada; Waxay ku taallaa mid ka mid ah haadkii ugu weynayd ee yeylka Wisconsin ah.
Taageerida Taageerada: Sababtoo ah difaaca deegaaneed ee muhimka ah waa mid muhiim ah, iyo Sanduuqa Ilaalinta (Fund Protection Conservation) wuxuu u isticmaalay deyga ugu horreeya si wax ku ool ah, waxaan soo saarnay deyn dhan $ 5 milyan.
Hababka Cusub waa Muhiim: Nidaamka Wabiga ee Mississippi oo caafimaad leh oo xasilan ayaa u baahan in wax laga beddelo dhaqanka beeraleyda malaayiin hektar oo kuyaal gobollada Dhexe. McKnight wuxuu ogaanayaa in qaabka loo yaqaan 'acre-by-acre preservation' uu yahay qalab muhiim ah, laakiin waa mid aad u qaali ah oo qallafsan si loo gaaro qiyaasta loo baahan yahay ee Wabiga Mississippi. Marka laga reebo ilaalinta dhulka, McKnight wuxuu sahaminta sidii loo kobcin lahaa baahida macaamiisha ee jawiga iyo ilaalinta biyaha ee goobaha shaqada. Waxaan kale oo aan taageernaa dadaalka shirkadda si aan u wanaajinno joogteynta joogtada ah ee silsiladaha sahayda.
Sawir Sawir ah: Sawirada Coldsnap Photography